Radio Sudoorawaz 95 Mhz स्मार्ट सिटी घोषणा गराउन कार्यान्वयन तर्फ अघि बढ्दै छौ
बिहिबार जेठ २४, २०७५, रेडियो सुदूर आवाज
स्थानिय निकायको निर्वाचनका समयमा अमरगढी स्मार्ट सिटीको नारा लगाई डडेल्धुराको ईतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टी बाट अमरगढी नगर प्रमुख बनेका बिद्यार्थी राजनितका स्ववियु नेता विशेश्वर प्रशाद ओझा संग पुष्कर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंस ः
बिद्यार्थी राजनिती बाट सिधै जनप्रतिनिधी भएर आउनु भयो के कस्तो फरक पाउनु भयो ?
विगतको बिद्यार्थी राजनिती भन्दा यो जनप्रतिनिधी नितान्त फरक विषय वस्तु हो । यो अहिले आफैमा स्थानिय सरकार हो । बिद्यार्थी राजनिती सामान्य तया यो राजनितीको आधार निर्माण गर्न, नेतृत्व विकास गर्न बिद्यार्थीका एजेण्डा कुराहरु उठान गर्न वा बिद्यार्थीको आन्दोलनका रुपमा सबैले सबैले बुझ्ने गरेका छन । अहिले जुन खालको जिम्मेवारी प्राप्त भयो । यो साँच्चिकै ऐतिहांसिक जिम्मेवारी हो । यो अवसर जिम्मेवारीको सही सदुपयोग गर्नु पर्छ भन्ने ढंगले म अगाडी बढिरहेको छु ।
नगर पालिकाको वातावरण अथवा कर्मचारीहरुको कार्यशैली कस्तो पाउनु भयो ?
केही गाह््रा कठिनाईहरु त हरेक ठाँउहरुमा हुन्छन । र हामि परिस्थिती संग जुध्न सक्नु पर्छ । संघर्ष गर्न सक्नु पर्छ । समग्र रुपमा नेतृत्व गर्नेले सबैलाई मिलाई सक्नु नै सफलता हो । हिजो लामो समय देखि कर्मचारी साथीले कार्यालय सञ्चालन गर्नु भएको थियो । म पनि जनप्रतिनिधी भएर आउनु पहिले केही अमरगढी नगरपालिकामा विकास निर्माणका काम जोड्नु प¥यो, कहि विकास निर्माणका कार्यमा बजेट बिनियोजन गर्नु प¥यो भने उहाहरु संग अनुरोध गर्नु पर्ने अवस्था थियो । कम उमेरमा नै मैले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दा अमरगढी सरकारको प्रमुख म । अब उहाहरुले हाम्रो निर्देशन सल्लाह बमोजिम काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । केही गाह््रो अप्ठेरो महसुस त भएको होला । तर पनि नेतृत्व गर्नेले उचित ढंगले व्यवस्थापन गरेर लैजानु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु म ।
निर्वाचनको समयमा तपाईले स्मार्ट सिटीको अबधारण राख्दै मत माग्नु भयो ? अन्य कयौ बाचा पनि गर्नु भयो ? याद छन कि बिर्सनु भयो ?
होईन जनता संग जुन निर्वाचनताका बाचा गरेका थियौ यो कुरा बिस्र्याै भने राजनिती गर्ने जो कसैको भविष्य पनि धरापमा पर्छ । उसले अगाडी प्रगती गर्न सक्दैन । मैले जनता संग गरेका बाचा सम्झेको छु । मैले नोट गरेर राखेको छु ।
के थिए बाचा ? पुरा गर्न सुरुवात गर्नु भयो कि भएन ?
खास गरी संविधान प्रदत्त अधिकारहरुमा पनि खानेपानि, शिक्षा, स्वास्थ्य यि आधारभुत आवश्यकता हुन । जुन खास गरी स्मार्ट सिटीको कुरा छ । स्मार्ट सिटी घोषणा गराउने सुचिकृत गर्न पहल गरेको थिए । अब त्यसको कार्यान्वयन तर्फ म अघि बढ्दै छु । कतिपय स्थानमा बिजुली थिएन । ति स्थानमा निर्णय नै गरी पोल गाड्ने, तार तान्ने काम भई सकेको छ भने गाउमा विस्तारी करण बाँकी छ । यस्तै केही खानेपानिका समस्या सम्बोधन भएका छन । खलंगा खानेपानिमा ५० लाख बिनियोजन गरी काम सञ्चालन भएको छ । यस संगै सडक, मठ मन्दिरहरुमा बजेट बिनियोजन गरी कामहरु भई रहेका छन ।
अमरगढीको चालु आर्थिक बर्षको बजेट कती हो ? आय स्रोत के कस्तो छ ? अनि वडाहरुमा कति कति बजेट बितण गर्नु भयो ?
निति तथा कार्यक्रम लाई सके पछि बजेट निर्माण गरेका थियौ । जम्मा ३२ करोड ५१ लाख रहेको थियो । आन्तरिक आम्दानि अनुमानित एक करोड १८ लाख राखेका थियौ । तर अहिले अध्ययन गर्दै जाँदा आय स्रोत लुकेर दबेर बसेको पाए । म करको दर बढाउनु भन्दा पनि करका दायराहरु फराकिलो बनाउनु पर्छ भनेर लागि रहेको छु । आगामी बर्ष एसको दुई गुणा आय स्रोत बनाउन सकिने आधारहरु देखेको छु । १८ लाख दामासाहिका हिसाबले बाडेका थियौ । त्यस अलावा ६ लाख जती एउटा शिर्षकमा थियो । सडक बोर्डको कुनै वडामा एक करोड सम्म पनि छ । नगर परिषद बाट एक वडा लाई ६ लाख छुटाईएको थियो ।
अमरगढी नगरपालिकाको हकमा कति वटा कानुन बने अहिले सम्म ?
नँया संरचना भएकाले थुप्रै चुनौती पनि छन । कानुनी जटिलता पनि छन । भर्खरै सम्पन्न दोस्रो नगर सभा बाट केही महत्व पुर्ण ऐन कार्यबिधिहरु निर्माण भई पास भई सकेका छन । जो केही कार्यबिधिहरु छन यो कार्यपालिका बाट टुंग्याउन सकिन्छ । १४÷१५ वटा कार्यबिधिहरु अहिले विधान समितीले काुनन बिध बिज्ञहरु हायर गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले सम्म कृषि, शहकारी ऐन पास भई सकेको छ । नगरसभा कार्यबिधि पहिले नै पास भई सकेको थियो । बिनियोजन ऐन लगायतका ऐन कार्यबिधि पास भई सकेका छन ।
परिणाममा देखिने गरी अहिले सम्म नगर भित्र के के काम गर्नु भयो ?
यो पहिलो बर्ष भएकाले मैले भन्छु अध्ययन अनुसन्धानकै बर्ष हो । गत बर्ष भन्दा यो बर्ष विकास निर्माणका काम बढी देखिएका छन । प्रभावकारी देखिएका छन । यस बर्ष कालो पत्रे भएका सडकहरुको स्तरउन्नती निकै गुणस्तरिय छ । एउटा सपिंग कम्प्लेक्स निर्माणका लागी डिपिआरको तयारी अघि बढेको छ । सडक विस्तर गर्ने कामको पनि सुरुवाती भएको छ । तुफानडाडा देखि झण्डै डेढ किलो मिटर सडक तिन मिटर चौडा पारी कालो पत्रेको काम सुरु भएको छ । तुफानडाँडा देखि टुडिखेल सम्मको सडक कालो पत्रेका लागी ठेक्का भई सकेको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागी ईक्वुपमेन्टहरु पनि जुटाएका छौ । आगामी बर्ष शैक्षिक गुणस्तर सुधारको बर्षका रुपमा लैजाने भनेर त्यसको अभियान थालनी गरेका छौ । यसको नतिजा ढिलो आउछ । भनिन्छनी छिट्टै प्रतिफल खोज्यौ भने धान रोप्नु पर्छ । १० बर्षमा प्रतिफल चाह्यौ भने रुख रोप्नु पर्छ । सय बर्ष सम्म प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने हो भने शिक्षा र बालवालिकामा लगानी गर्नु पर्छ । त्यस कारण यो अभियानमा अगाडी बढेका छौ ।
अमरगढीका मुख्य चुनौती र अम्भावनाहरु के कस्ता छन ?
चुनौती स्वभाविक रुपमै, जहा सम्भावनाहरु हुन्छन त्यहा चुनौती हुन्छन । तर मैले अमरगढीमा सम्भाना बढी देखेको छु । चुनौती केही होलान । चुनौतीलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्दै हामिले अघि बढ्न सक्नु पर्छ । यो नै सफलता हो । यो नै बुद्धिमता हो । खास गरी अमरगढी नगरपालिका भौगोलिक रुपमा सात नं. प्रदेशकै केन्द्र बिन्दुमा छ । निकै सुन्दर नगरपालिका छ । यस कारण हामिले त्यो खालको पुर्वाधारहरु निर्माण गर्न सक्यौ भने प्रादेशिक राजधानि धनगढी बनाईए पनि कुनै फरक पर्दैन । किनकी जुन यो प्राकृतिक सौन्दर्यता छ । वातावरण छ यो नै हाम्रो सम्पती हो । पर्यटन विकासको सन्दर्भमा सबै भन्दा बढी सम्भावना अमरगढी भित्र छ । ऐतिहासिंक अमरगढी किल्ला छ । प्रशिद्ध धार्मिक शक्तिपिठ उग्रतारा भगवती मन्दिर, घटालथान, शहस्त्रलिंग धुरा, शैलेश्वर महादेव लगायत महत्वपुर्ण शक्तिपिठ छन । अ मरगढी सात पोखरामा रहेको रावलतोली गुफा हाम्रो सबै भन्दा ठुलो सम्पती हो ।
यस संगै खेल पुर्वाधार विकासका लागी राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला र फुटवल रंगशालाको डिपिआर भई सकेको छ । यि दुई पुर्वाधार निर्माण गर्न सके सात नं. प्रदेशका खेलकुद सम्बन्धिका गतिबिधिहरु यहा गर्न सकिन्छ । एउटा सिटी हल निर्माणको कुरा अघि सारेका छौ । हवाई मैदान छैन यसको निर्माणका लागी पनि पहल भईरहेको छ । यस संगै व्यवस्थित बस पार्क निर्माणको काम पनि सञ्चालनमै छ ।
अमरगढीका दिर्घकालिन सम्भावित स्रोतहरु के के हुन सक्छन ?
आन्तरिक स्रोत भित्र घर भाडाको ठुलो श्रोत छ यो दबिएको छ । पर्यटनको प्रसस्त सम्भावना छ । प्यराग्लाईडिंगको सफल परिक्षण भई सकेको छ । यसको कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न तर्फ हामिले प्रयास थालेका छौ । भ्यु टावर निर्माणका लागी पनि आवश्यक गृहकार्य गरी रहेका छौ । अमरगढी पार्क निर्माण गरी त्यहा डोट्उयाली संस्कृति झल्कने गरी संग्राहलय बनाउने प्रयास छ । यहाको ढुंगा गिट्टी, वालुवा यो पनि आमदानिको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ ।